Wararka - Waa maxay farxadda
Waa maxay sheerer
Marba marka ka dambaysa macaamiisheennu waxay bilaabayaan inay adeegsadaan sheer si ay u buuxiyaan alaabada dareeraha ah.
Kadib, waa maxay farxad?
Kani waa weel baako cusub oo isku daraya dabacsanaanta Bacda Sanduuqa iyo faa'iidooyinka hagaagsan ee alaabada baakadaha adag ama adag, taas oo ka dhigaysa jeegga inuu yahay midka ugu habboon ee dhammaan xulashooyinkan. Waxay ka kooban tahay jubbadda-qaabeeya, bac balaasti ah oo lakabyo badan leh, dabool ama waalka iyo sanduuqa kartoonka.
Qaabdhismeedkeeda u eg qaabku wuxuu siinayaa xasillooni weyn iyo awoodda faaruqinta ugu badan. Waxay leedahay laba lakab: lakabka sare: (polyamide + polyetylen) wuxuu ka ilaaliyaa oksijiinta iyo qoyaanka; cufnaanteeda iyo halabuurkeedu waa kala duwan yahay iyadoo ku xiran baahida macmiilka. Isku darka labada lakab wuxuu siinayaa weelka weel jilicsan laakiin qaab dhismeed la xoojiyey.
Markuu buuxo, oo ay ku jirto sanduuqiisa kartoonka, waa mid si fiican loo adkeyn karo, sameysmo sariir nabdoon oo xasilloon. Markay faaruqdo, qaybaheeda waa la qaadi karaa oo la keydin karaa iyadoo la laalaaban karo, sidaas awgeedna si weyn ayey u yareynaysaa booska loo baahan yahay. Hoos udhacani wuxuu keenaa keyd dhaqaale.
Cheertainer waxaa loo isticmaali karaa dhammaan noocyada wax soo saarka dareeraha iyo kuwa dareeraha ah si loogu isticmaalo warshadaha iyo gudaha. Qeybaha ugu muhiimsan ee loogu talagalay waa:
• Kiimikooyin iyo Agrochemical kiimiko (saliidaha, ranjiyeyaasha, dhejiska, faleebada, beeraha, xoolaha, daaweynta biyaha, shidaalka dareeraha ah, dawooyinka iyo waxyaabaha la isku qurxiyo). • Alaabta wax lagu nadiifiyo • Saliidaha • Cuntada iyo cabitaanka (Jabaan dartiis, khal, xawaash, saafi, suugada, saldhigyada cabitaanada, kafee, saliid, casiir iyo waxyaabaha caanaha laga sameeyo)
Cheertainers ayaa ka caawinaya macmiilka inuu yareeyo qiimaha.
l 60% hoos udhaca kaydka bakhaarada
l 20% Dhimista kharashka tamarta
l 50% Dhimista kharashka gaadiidka
l 90% Dhimista kharashyada dib-u-warshadaynta
Sanduuqa kartoonka ee sheer ayaa leh faa'iidooyinkiisa:
Sanduuqa kartoonka waa 100% dib loo isticmaali karo.
Baaxad weyn, oo gebi ahaanba la beddeli karo oo loogu talagalay isgaarsiinta garaafka.
Isugeyn isugeyn isugeyn iyo palletising, taas oo yareyneysa kharashka saadka.
Qiyaaso kala duwan iyo nashqadeyn si buuxda loo habeeyay si loo qanciyo baahida macmiil kasta ama shey kasta.
Waqtiga boostada: Sep-06-2020